Shirkaddaha APPLE iyo SAMSUNG Iyo Khaladkooga Qur’aanka | Maankaab.com
Shirkaddaha APPLE iyo SAMSUNG Iyo Khaladkooga Qur’aanka
7th March 2015 | Published by: maankaab
AFEEF qormooyinkii taxanaha ahaa Cilmiga Xadiiska waxa inaga so dhex galay qormadan kadiska ah, sida ajligeed todobaadkanna way inaga yar hakan doonta, sidoo kale waxa aan kula talin lahaa akhristaha ku arka qormadan jar’aadidka inu xifdiyo maadama uu ku yaalaan qayb ka mid ah aayaadka Qur’aanka Kariimka ahii.
In muddo ahba waxa uu ku socday xawaaraha casriga ahii ‘Technology’ xawli aan la qiyaasi karin oo sadaalintisu adag tahay. Xawaarahani wuxu keenay in si sahlan loogu wada xidhidho dunida daafaheeda. Maalinba maalinta ka dambaysa wuxu noqonayey adeeg loo aayo, labatankii sanadood ee ugu dambayey siduu isku bedelay ee uu hormarka u samayey mu hayn wax la filayey.
koor gacmeedka ‘Mobile’ laftiisu wuxu ka mid ahaa adeegan aadka loogu aayey ee sidu isu casri garaynayey gaadhay halka uu maanta marayo. Maanta waxa uu gaadhay heer aad waxa aad doonto ba isaga kuso shubanaysid. Kooraha qaar ba u dhigma oo la qaad ah adeegaha gacanta ‘Laptob’.
Is rogroga dunida oo lafteedu cashar yahay oo maalinba qofi gacan sareeyo ayaa keentay in maanta adeegga aynu intaa ka sheekaynayno suro galiyaan Yuruub iyo Maraykan iyo inta la jaan haysa, sidaa ajligeed ku bogaadinta iyo la haysashadu waa mid dunidu ula siman tahay haba ahaadan inta ciidda ka hosayse.
Nimankaa hirgaliyey waxa ay ugu tala galeen inay badeecadoodu suuq yeelato oo laga iibsado, si kasta oo looga iibsan lahaana way sura galiyeen. Ka sokow balaadhinta qaadistiisa waxay kuso dareen in wax walba oo loo baahdo lagu shuban karo. Si la mid ah waxa ay u dhigeen in luuqad kasta laga heli karo amase dal walba oo ay ugu talo galeen inu tago luuqadiisa ugu shubaan.
Dunida Islaamka oo ah duni balaadhan se ka aradan hirgalinta iyo abuuridda wax so saar midho dhal ah ayaa ku soo gaabsaday inay noqdaan baahanayaasha baahida loo abuuro, xoolahooga dihinna loogu dooriyo kolba dhaldhalaalka socda aminta.
Koor gacmeedkan ‘Mobile’ ayaa waayadan lagu shubta Qur’aanka Kariimka ah iyo dhamaan kutubta diinta iyaga oo lama taabtan ah ’Soft’, hubaal waxa ah in lagu badhaadhay.
Haddii aan gudaha ugu dhaadhaco qormadaydan waxa ay daaran tahay khalad lagu arkay mid ka mid ah Koor gacmeed ay soo saareen shirkaddaha lagu magaacabo ‘APPLE iyo SAMSUNG’ shirkaddahaas ayaa si isku mid ah u faafiyey Qur’aanka Kaariimka ah ee ku yaalla khaanadahooga ‘Application’ isagoo wax lagu siyaadiyey sida korba ku sawiran ee aad ka eegi karto xagga falaadhu eegayso.
Khaladkaasi laba mid ba wu noqon karaa khalad loo badheedhay iyo mid la il duufayba ama madbaci ah. Sidaa ajligeed waxa aad odhan karta waar ina Aadam waa mid khalad u samaysane ku daa waa khalad aan loogu talo galin. Midba is waydin mudan taaso ah halka aayadani ku jirto macno sidee ah bay gudbinaysa.
Aayadda lixaad ee Suuradda Al-Cimraan oo ah halka ay aaladahani wax kuso kordhiyeen ayaan jecelahay in aan dul is taago labada macne ee ay leedahay marka ay aayadu sideedi tahay iyo marka wax lagu darayba.
Aayaddu marka ay saxdeeda tahay Alle SWT waxa uu leeyahay “waa Allahi kuguso dajiyey adiga ’Muxamadow’ kitaabka ‘Qur’aanka’ waxa ka mid ah ‘Qur’aankii’ aayado macnahooga la fahmayo, oo kitaabka asal u ah, waxa kale oo ka mid ah ‘Qur’aankii’ aayado macnahooga Alle un garanayo. Kuwa qalbigoogu leexday waxa ay raacayaan qaybta Alle un garanayo, iyaga oo doonaya fitno, tafsiirka aayadahaana way raadinayaan. Mana garanayo tafsiirkaa cid aan Alle ahayn, iyo kuwa cilmigu biyo dhigay. Waxa ay leeyihin ‘Rasikhiintaasi’ rumaynay idilkii ee xagga Rabi ka yimi. Ma waan toobayo illa kuwa cilmiga leh mooye”.
haddaba dhawrkan qodob aynu kala qaadno:-
Aayaddu maxay ka hadlaysa
Khaladka lagu sameyey xaggu ka dhawacaya
Maxase looga dan lahaa haddii khaladkaasi ku tallo gal yahay.
Ugu horayn aayadu waxa ay ka hadlaysa waa Qur’aanka Kariimka ah oo ay laba u kala qaaday. Qayb fasiirkiisu cad yahay iyo qayb loo yaqaan ‘Mutashabah’ oo macnahooga un Alle SWT og yahay.
Hadaba khaladka aayadda ku jira waxa weeji iyadoo lagu siyaadiyey xaraf macnihii dhamaa ee aayaddu lahayd leexinaya macne kalana u wareejinaya. Waxa lagu kordhiyey aayadda xarafka ah ‘bil xaqi’. Kaas oo doorinaya macnihii dhamaa ee aayadu lahayd. Kuwa qalbigoogu leexday waxa ay raacayaan qaybta Alle un garanayo, iyaga oo doonaya fitno. Macnaha saxda ahii wakaa se haddii la raaco sida ku dhigan halka sare Kuwa qaliboogu leexday waxa ay raacayaan qaybta Alle un garanayo xaqna way u raacayan. Iyaga oo doonaya fitno. Markaa halka ay wax iska badaleen waad ila garateen baan filaya.
Haddi qoraalku khalad madbaciyan ah yahay waa iga bararujin un. Haa waa khalad madbaciyan waayo maanad arag inta Bil xaqi la raaciyey oo waa saddex jeer. Haa armay ugu tallo galeen inay noqoto sidaa si dadku u akhriyaan hal bi xaqi.
Haddi ku tallo gal yahay qorshuhu maaha wax waaraya waayo Alle SWT wuxu yidhi “anaga ayaa so dajinay Qur’aanka anaga ayaana ilaalinayna”. Markaa mid loo baqanayo maaha ilaalintaasi oo wataa haddaba fashilantay ama so baxdayba waa haddii aan loogu tallo galine.
Aayadani waa waxa ay ka mid tahay aayadaha miisaanka leh waayo waxa ay kala saaraysa Qur’aanka cad iyo aayadaha macnahooga un Alle garanayo. Iyo wixii ay ka yidhaahdeen kuwi ka doodayey, sidaa ajligeed ayaan ugu qalin qaatay in aan dul is taago bararujin ahaan.